Milicsiga heerka aqooneed iyo hadimada maamulihii madaarka Cigaal | Aftahan News
Milicsiga heerka aqooneed iyo hadimada maamulihii madaarka Cigaal
November 4, 2018 | Filed under: Aragtida Bulshada | Posted by: Aftahan News
“Waa lagu digtaa ruux hadduu, kuu darnaan jiraye
Bal dayaay wadaadkii wakaa, sii dabayshadaye” Cali Aadan Gorayo (Cali-Dhuux)
Maqaalkan xuska iyo xurmada ah, oo aan qaybaha ugu badan ka xiganayo qormo uu hore u diyaariyay una faafiyay Eng Maxamed Beddel, waxa aynu ku suntaynnaa waxqabadka iyo waxyeellada dhallinyaro ay xukuumaddii hore u samaysatay dadka Hargeysa/Sallaxley/Balli-mataan, oo caan ku ah “Jin-dagaagay”. Si gaar ah waxa aan maanta u soo gudbin doonaa faallo ku saabsan Maamulihii Madaarka Cigaal Md Maxamed Yuusuf Ismaaciil. Kaas oo maanta la dhaafiyay xeradii uu tagri-falka, xadgudubka, dhaca iyo boobka la dhex soognaa. Waxa loo beddelay Madaarka Berbera oo ay xukuumadda Somaliland ka kiraysay dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta, taas oo ka dhigan tababarkii ciidan ee Saybeeriya la isugu madallufin jiray.
Durbadiiba waxa uu noqday adeege ku wanaagsan wargudbinta, iska dhaadhicinta, raxlaynta iyo summadaha ay jecel yihiin madaxda xilka ka hayaa. Markii uu socday dib-u-dhiska madaarku (2011-2013) waxa uu shaqaalaha joogtada ah ee madaarka Cigaal sida kuwa korontada ku odhan jiray “Ii soo sheeg marka wasiirku soo laabto gelinka dambe”, isla qacda uu xogtaas helo ayuu gegada iman jiray. Waxa uu markaas iska dhigayay nin shaqada daacad u ah oo labada gelinba adeega, isaga oo aan qaadan gunno dheeraad ah.
“Dheri reer u karayaa
Isaga oo da’ ahaan nin weyn ah ayaa uu ka yimi deegaanka Uubaale oo ay qoyskoodu reer miyi ahaan u degganaayeen, kaddibna waxa la qoray dugsiga Qudhacdheer. Maadaama oo uu ka weynaa ardayda lodkiisa ah, waa uu sii wadi kari waayay aqoonta dugsiga hoose/dhexe. Sida awr la fadhiyo orgi ayuu noqday. Waxa loo boodsiiyay dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali kaas oo uu 2006dii kaga mid noqday waxa loo yaqaanno “Indha-caddaynta”.
Waayadaas waxa ay wasaaradda waxbarashadu qaadi jirtay imtixaan loo yaqaanno “Half GC” kaas oo ay mari jireena ardayda ka gudbaysa fasalka 2aad ee dugsiga sare. Maadaama oo aanay aqoontiisu dhisnayn, waxa uu geli kari waayay jirrabkaas. Sidaas awgeed ayuu hadda mar kale u baalmaray geeddiga aqooneed. Jaamacadda Hargeysa ayuu sifo leexsan ku galay. Kulliyadda ICT ayuu arday ka noqday.
Dadkaas waxa ka mid ah xaaska Shanfool Xaashi Guuleed oo abti ruma u ah Wasiirka Maaliyadda Yuusuf Maxamed Cabdi. “Aniga i xidhaye, maxaa dumaashidaa kuu geeyay?” ayuu ku garnaqsaday Shanfool Xaashi oo ah Guddoomiyaha Beeralayda Uubaale. Dadkaas waxa lagu eedeeyay in ay jarjareen siligga madaarka, eeddaasna wax caddayn ah looma helin. Muddo ku dhaw 20 cisho ayay liinta ku cabbayeen rugta madaarka.
4. Kaalin weyn ayuu ka qaatay isku-dirka xukuumadda iyo dadka deegaanka. Lama tirin karo inta jeer ee uu sharci-darro ku xidhay dad aan waxba galabsan, sirdoonka uu ku wareejiyay ama xorriyaddooda loo celiyay iyada oo aan daw la marin. Saw kama war haysaan gacan-ka-hadalkii, feedhkii iyo duudsigii uu ku sameeyay Majaajilaystaha caanka ah ee Ajakis oo ka shaqeeya Universal TV “Nin dheer oo madaw, malakul-mawd aa mooddo, acuudu billah ayuu lee ahaa” ayuu Ajakis yidhi.
Nin weyn oo muddo dheer ka tirsanaa Wasaaradda Duulista, gaar ahaanna ka shaqayn jiray madaarka Berbera oo ay xigaal yihiin Maamulaha Madaarka Hargeysa ayaa lagu yidhi “Maxaad xil u doonan weyday?”. Wuxuu yidhi “Shaqooyinka uu Maxamed Yuusuf qabto ayaanan qaban karin”.
Qalinkii: Siciid Maxamuud Gahayr